Saddexda xisbi ee ka jira Somaliland midba wax baan ku dhaliilay.By Xamse Xadaari(Xasmse Xasan Maydhane) | Radio Borama
You are here : Radio Borama » FADHIGA SUBULAHA » Saddexda xisbi ee ka jira Somaliland midba wax baan ku dhaliilay.By Xamse Xadaari(Xasmse Xasan Maydhane)
Posted by admin on September 28th, 2017 08:41 AM | FADHIGA SUBULAHA
Xisbiga Ucid waxan ku dhaliilay tartan iyo loolan adag lama soo shir tago oo had iyo jeer wuxu u muuqdaa midka ugu liita saddexda xisbi. Intaas waxa u dheer waa xisbi u xidhan hal shaqsi oo Faysal unbuu ka bilaabmaa kuna dhamaadaa; tartan adag ma galo cid tartan adag gashana ma ogola.
Xisbiga Kulmiye waxa aan ku dhaliilay hogaamiyaha adaygiisa waxa ay ka eegaan dhanka dagaalka iyo sooyaalkiisa imisa dagaal buu galay. Dalku maskax lagu hago ayu rabaa ee muruq adag ma rabo. Dadka dhadhamiyay macaaanka nabadu, saansaan dagaal ma doonayaane, wax kale inoogu ololeeya khayr qabeyaal. Waxa kale oon ku dhaliilay, xisbigu wuxu u muuqdaa mid heshiis labbo beelood ku dhisan sida aan ka dhadhansaday hadalkii Wasiir Samsam. Dalku uu ka weyn yahay mid labbo beelood u heshiin karaan hogaamintiisa. Codka dadkuna dayn beelaysan iyo diiqo toona maaha.
Xisbiga Wadani waxa aan ku dhaliilay waxa ay baraha bulshada iyo muuq baahiyeyaashaba la soo fadhiistaan hebel ma qoslo iyo su’aal anshaxa ka madhan oo odhanaysa (Ma askari baynu dooranaa?). Askarigu wuxu leeyahay xuquuq dastuuri ah oo lagu dooran karo waxna ku dooran karo. Askari, dhakhtar, iyo macalin qiimaha ay leeyihiin waa macruuf. Uma maleeyo xisbiyadu in ay aqoon isku dhaamaan waayo mid walba waxa ku jira aqoon yahan badan. Dalka Maraykanka waxa soo maray ku dhawaad tobban madaxweyne oo askar soo ahaa waxa ugu caansanaa Theodore Roosevelt. Askari ma talin karo anigu ma aaminsani. Muuse Biixi wuxu bartay aqoon ka balaadhan ta ciidanka ee yaan la qarin.
« Maxamed Cali isagu waxba ma ogo. Laakiin Sobobo badan ayaanu Xisbiga WADDANI ugu dhiiranayn dhisida Haykalaka Maamul ee Awdal iyo Gabiley.Qalinkii Saleebaan Axmed Mandeela
DAAWO Ramaaxaw adiga iyo Badhasabkii kaa Horeeyay waad kala Nasib badan tihin isaga waxa loo bixiyay Qabyo Tire Adigana!!!! »